Fitaovana Vaovao Fisintonana Feo ho an’ny Tetikasa Wiktionary Ifandrimbonan’ny Avy Any Ifotony Amin’ny Teny Odia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2017 8:42 GMT
Vakio amin'ny teny ଓଡ଼ିଆ , Ελληνικά, Español, English, বাংলা, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ, English
Fitaovana iray fandraisana feo any an-tokantrano ho an'ny tetikasa Kathabhidhana an'ny Wiktionary. Sary avy amin'i Subhashish Panigrahi avy ao amin'ny Wikimedia Commons. CC BY-SA 4.0
Mampanantena betsaka ny Wiktonary, tetikasan'i Wikipedia izay mampiasa fiteny maro. Amin'izao fotoana izao, tsy dia misy tahirim-peo ampiasàna fahazoandalana malalaka afaka henoina na sintoninao — indrindra raha tsy iray amin'ireo fiteny lehibe ny tenin-drazanao. Efa misy amin'ny fiteny maro izao ny Wiktionary ary ho fanampin'ny famaritana ireo teny, dia misy naotim-panononana maro ihany koa — farafahakeliny eo amin'ny lafiny Fanononana Abidia Iraisam-pirenena (IPA) — afaka jerena. Ankehitriny, manampy amin'ny fanatsorana ny fomba fanomezana an-tsitrapo ho an'ny tetikasa Odia Wiktionary ny vondrom-piarahamonina iray amin'ny Fiteny Odia.
Kathabhidhana, tetikasana vondrom-piarahamonina iray tarihin'ny mpandray anjary ao amin'ny Global Voices sady Wikipediana Odia Subhashish Panigrahi, dia vahaolana iray manana loharano misokatra ho an'ny firaketana ampahany betsaka amin'ireo teny. Avy eo mampakatra azy ireo ho eo ambany fahazoandàlana malalaka izy mba zavatra ilain'ny tetikasa toy ny Wiktionary.
Odia, iray amin'ireo tenim-pirenena ao India, dia teny Indo-Aryana izay resahana tompon-teny manodidina ny 40 tapitrisa indrindra any atsinanan'i India. Miaraka aminà lova ara-literatiora mihoatra ny 5.000 taona, efa nekena ho isan'ireo fiteny tranainy indrindra any Azia Atsimo izy io, ary efa nomen'ny fanjakana Indiana ny satan'ny fiteny klassika.
Fa noho ny fampiasana ny rafitra fanoratana tsy mifototra amin'ny Unicode, mbola taraiky any aoriana ny fisian'ilay fiteny ety anatin'ny aterineto. Mba hiatrehana ireny olana ireny, dia nampidirina tao amin'ny Odia Wikipedia ny vondrona iray mpamadika ny toetry ny karazana litera izay manova ny lahatsoratra tendrena ho Unicode amin'ny fampiasana karazana rafitra mpamadika ny toetry ny karazana litera tsy Unicode; efa nampiditra zavatra mihoatra ny 12.000 izy amin'izao. Ny Wiktionary Odia, amin'ny lafiny hafa, toy ny diksionera maimaim-poana, mifototra amin'ny aterineto ary nalaina tanteraka avy tamin'ny teny Odia, dia miezaka ny hameno ny hantsana.
Maka ny aingam-panahiny avy amin'ny rindrambaiko mampiasa loharano misokatra vokarin'i Shrinivasan T, ilay tetikasa izay nampiasa ny fiteny fandaharana Python mba hampandehatenany sy hanatsorana ny dingana. Nizara ny torolalany tao amin'ny Youtube izy:
Nanana ny aingam-panahy hanao ny tetikasa Kathabhidhana i Panigraphi satria dingana navesatra ny fomba efa misy: mila manonona ary mitahiry teny iray ianao, avy eo mamadika izany ho amin'ny endrika Ogg Vorbis ho an'ny kaonty Wikimedia Commons anao, izay foibe fametrahana fototra ny rakitra haino aman-jery ho an'ny tetikasa Wikimedia rehetra. Rehefa nampakarina, atsofoka ao amin'ny tetikasa Wiktionary ilay fampidirana. Ankoatra fampasàna ny tànana amin'ny firaketana ny fanononana, misy ihany koa tetikasa mampiasa loharano misokatra izay mamadika ny soratra ho teny, antsoina hoe Dhvani izay miasa amin'ny ankamaroan'ny teny Indiana.
Mifanohitra amin'izany kosa, manampy ireo mpiteny tsy teratany amin'ny fihainoana ny fanononana ny teny sasany ny fananana rakipeon'ireo teny ao amin'ny Wiktionary — ary koa ireo olona manana fahasembanana amin'ny maso. Afaka ampiasaina ho anà tetikasa Fikarakarana ny Fiteny Natoraly ilay tranombokin'ny teny, toy ny fananganana milina mamadika ny soratra ho feo sy feo ho feo ihany.
Afaka misintona dika iray amin'ny Kathabhidhana ianao ary mahita ireo tahirim-peo rehetra natao tamin'ny fampiasana ity rindrambaiko ity.